FIFIDIANANA : Mambabo ny mpifidy amin’ny endrika maro ny mpirotsaka ho fidiana | Madatopinfo
FIFIDIANANA : Mambabo ny mpifidy amin’ny endrika maro ny mpirotsaka ho fidiana
Papango lahy anaty katsaka avokoa ireo kandida ka izay mivoaka babany avokoa. Mahavory lanona mponina sy ny mpomba azy hatrany ireo mpirotsaka ho fidiana ho Filoham-pirenena, na amin’ny fotoana fanambarany ny filatsahan-ko fidiana na amin’ny fanaterana ny antotan-taratasy na amin’ireo famoriam-bahoaka etsy sy eroa. Araka Ny loharanom-baovao azo antoka, tsy fitakiana fa fandaminana ny tetipanorona no anton’ny fihaonan’ny mpomba ny Filoham-pirenena teo aloha, Marc Ravalomanana, isaky ny sabotsy eo amin’ny Magro Behoririka. Efa misy ny fivoriana sy lamina isam-pokontany, raha ny eto Andranivohitra sy ny manodidina no asian-teny fa fametrahana ny lamina amin’ny dingana ombieniombieny no antom-pisian’ny fihaonam-be eo amin’ny MAGRO AAA.
Eo am-panatanterahina ny fihaonam-bem-paritany any Antsiranana ihany koa ny antoko mpanohana ny Fitondrana izay mijoro tarihin’i Hery Rajaonarimampianina. Araka ny tombana, noho ny Filohan’ny antoko HVM izay nametra-pialana tsy ho lehiben’ny antoko, herinandro vitsy lasa izay, fa isahana an’ny Filoham-panjakana amin’ny maha-Lehiben’ny Antenimierandoholona azy, i Rivo Rakotovao dia azo antoka fa hifaninana handimby ny tenany ny Filoham-pirenena ankehitriny.
Mitana ny sain’ny mpanara-baovao maro ihany koa ny fanohizana ny fitetezam-paritra ataon’ny Filohan’ny Tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina. Feno hipoka ny kianjan’ny Alatsinainy Bakaro, Distrika Andramasina, raha tsy ilaza afa-tsy io. Marihina moa fa ny fanamboaran-dalana izay mampikaikaika iny faritra iny no nampanantenainy. Marihina anefa fa tsy vao izy fa efa hatramin’ny repoblika voalohany no nampanantena toy izany avokoa ireo ho mpirotsaka ho fidiana mba hatao fitaovana politika fa antsasaka taonjato aty aoriana, mbola io ihany eo ilay lalàna tsy azo ifandraisana amin’ny aty Andranivohitra rehefa fahavaratra. Voamarika ihany koa fa mahavory olona ireo kandida mitondra angidimby satria maro no liana te hijery helikoptera fotsiny ihany. Midika izany fa tsy voatery hizara vola na zavatra ny kandida vao mahavory olona.